Funda Ngezisebenzi Zethu Ezesabekayo »IHodges University
Imfundo Ephakeme Ifundiswa Ngongoti Abafundile
IHodges U Faculty & Abasebenzi
IHodges U inikela ngemfundo eyodwa yomusa engatholakali kwenye indawo noma ngabe uthola imfundo yakho ekhampasi, online, noma ngefomethi ehlanganisiwe. Kungani? Isikhundla sethu, i-Adjunct Faculty, kanye nabasebenzi banenhloso eyodwa - ukukusiza uphumelele! KwaHodges, siyaziqonda izinselelo zabafundi abadala abanomsebenzi kanye nezibopho zomndeni. Kungakho sivele savela ukukunikeza amathuluzi owadingayo ukuze uphumelele kwezemfundo nasekusebenzeni kwakho.
AmaDini kuzo zonke izikole zethu azibophezele empumelelweni yakho. Bazinika isikhathi sokuhlangana nawe ukusiza ekuqedeni noma yiziphi izinselelo okungenzeka uhlangabezana nazo. Inqubomgomo yomnyango ovulekile isho ukuthi ngamunye wamaDini ethu uyatholakala. Sicela welule isandla, noma ngabe uzethula nje. EHodges University, amaDean ethu afuna ukuthi ufeze izinhloso zakho zemfundo! Ake sikusize endleleni.
Ngamalungu ethu e-Faculty, uzothola ubuhlakani obuhehayo nobuchwephesha bokuhlinzeka abanikeza ngemfundo yomuntu ngamunye kuya ekolishi ekufanele. Osayizi bethu bekilasi abancane benza kube lula ukuthola ukunakwa okubaluleke kakhulu kuwe ukuze ufinyelele imigomo yakho yezemfundo neyekhondo lomsebenzi. Ukufunda kuyimpumelelo yokuphila kwakho konke futhi silapha ukukuxhasa njengoba isidingo sakho solwazi olwengeziwe sikhula. Futhi, ngoba amalungu ethu obuhlakani baseyunivesithi anolwazi emkhakheni awufundisayo, uzofunda okungaphezu kwemfundiso futhi okuningi okufundayo kungasetshenziswa esikhundleni sakho samanje.
Abasebenzi bethu balapha ngawe. Kusuka kubabulali bethu kuya kokwamukelwa kosizo lwezezimali kanye nabasebenzi besikhungo sezinsizakalo zomakadebona - sikufakile. Abasebenzi bethu balapha ukukusiza ngazo zonke izindlela, ngisho nangemva kokuphothula iziqu.
Abasebenzi Directory Ukucinga